Turkiga oo xukumay 337 qof oo ku lug lahaa Afgemi dhicisoobay | Berberanews.com
Home WARARKA Turkiga oo xukumay 337 qof oo ku lug lahaa Afgemi dhicisoobay
Ankara-(Berberanews)-Maxkamad ku taal dalka Turkiga ayaa xabsi ku xukuntay 337 duuliye oo hore iyo dad kale oo la tuhunsan yahay in ay ku lug lahaayeen shirqool ay ku doonayeen in ay ku afgembiyaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan afgambigii dhicisoobay ee ka dhacay afarta sano ka hor, sida ay muujisay dukumiinti maxkamadeed oo ay heshay wakaaladda wararka ee AFP.
Ku dhowaad 500 oo eedeysanayaal ah ayaa lagu eedeeyay in ay fuliyeen isku daygii afgambiga dowladda bishii July 15, 2016, iyagoo ka soo qaaday saldhig diyaaradeed oo ku dhow caasimada Ankara.
In ka badan 250 qof ayaa lagu diley isku dayga iyada oo askartu amar ku bixinayeen diyaaradaha dagaalka, helikabtarrada iyo taangiyada si ay ula wareegaan gacan ku haynta xarumaha muhiimka ah ee dawladda.
Maxkamadaynta ayaa ahayd tii ugu saraysay ee daraasiin dacwado maxkamadeed lagu badhtilmaameedsado kumanaan qof oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen isku daygii afgambi, kaas oo Ankara ay ku eedeysay taageerayaasha daaciga muslimka ah ee ganacsadaha ah ee degan Mareykanka, Fethullah Gulen.
Isku soo wada duuboo 475 eedeysane ee dacwad lagu soo oogay, 365 kamid ah waxaa lagu hayaa xabsiga. Xukunnada nolosha ee 337-ka ah ee la soo saaray, 291 ka mid ah ayaa lagu xukumay xabsi daa’in – oo ah ciqaabta ugu daran ee maxkamadaha Turkiga – taasoo la macno ah inaanay suurta gal ahayn sii-dayn.
Previous articleAbbiy Ahmed asks Makelle residents to “stay indoors” for final Operation
Next articleGeeska Afrika: Xaaladda siyaasadeed, dhaqaale iyo amni ee uu galay